Craig Federighi anosimbisa kuti hakuchazovazve neruzivo rwezvakasara zvegore | IPhone nhau
Craig Federighi anosimbisa kuti hakuchazove neakakosha kune yakasara yegore
Mumakore maviri apfuura, Apple yakadzora huwandu hwechinyorwa kusvika pazere. Mumakore apfuura, vakomana kubva kuCupertino vakaita chiitiko cheiyo iPhone, imwe yeiyo iPad uye imwe yeMac, kwete kuverenga iyo WWDC iyo Apple inobata gore rega muna Chikumi. Gore rakapera, mwedzi mushure mekuunza iyo nyowani iPhone 7 uye 7 Plus, Apple yakapemberera nyowani nyowani muna Gumiguru, yakakosha Apple yakaunza kuvandudzwa kwakamirirwa kwenguva refu kweMacBook Pro, MacBook Pro ine Kubata Bar uye Kubata ID. Mwedzi mitanhatu gare gare, Apple yakavandudza iyo MacBook Pro renji, saka mune dzidziso muna Gumiguru ichiri nyowani nyowani inoperekedzwa pamwe neshoko rakakosha
Zvakanaka, hazvizove. Muverengi weMacRumors akabata Craig Federighi kuti abvunze kana vachironga kubata kiyi nyowani mumazuva 9 asara aGumiguru. Craig akapindura kuti kwete, izvo hapana nhaurwa nyowani inorongwa kune yasara gore kuratidza chero chishandiso chitsva. Pachinyakare apo Apple yakaita hurukuro muna Gumiguru, misi yakasarudzwa yaigara iri nguva pfupi mwedzi usati wapera, saka nguva ino yaigona kunge iri yechi 27, 30 kana 31 dai zvainge zvaitwa.
Apple ichine zvigadzirwa zviviri zvakamirira kuvhurwa. Kune rimwe divi tinowana iyo HomePod, mutauri iyo Apple inoda kuti tifarire mimhanzi zvizere kuwedzera pakutibvumidza kusangana naSiri, kunyangwe iri basa riine zvese zvinoratidza kuva sekondari. Kune rimwe divi isu tinowana iyo iMac Pro, chishandiso chinobaya pamusika nacho mutengo wekutanga we $ 4.999 uye iyo Apple inoda kuzadzikisa zvido zvevashandisi vepamhepo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » Noticias » Craig Federighi anosimbisa kuti hakuchazove neakakosha kune yakasara yegore